Shona Clocks Illustrated Lecture | Kudzidza ChiGerman, Kudzidza ChiGerman
musha » German Exercises » Zviratidzo zveGermany Zvichienzaniswa
Maziso eGermany, 8., 9., 10. Chikoro German Clocks, Illustrated German Clocks Lecture
Takatarisana nezvenyaya yekuona kweGermany kakawanda mune zvidzidzo zvekare pane webhusaiti yedu, shamwari dzinodiwa.Kana uchida kuverenga hurukuro yakazara uye yakajeka yekurindira kweGermany pamberi pekuona kweGermany, tapota chinyanisei chikwata chiri pasi apa
Iwe unogona kutsvaga webhusaiti yedu kuti uone zvimwe zvidzidzo zvedu pamusoro pekurinda kweGermany.
Zvino ngationei zvakare nyaya yemajeri echiGermany nemuenzaniso wakaratidzwa.
Sezvaunoziva, muchiGermany, maawa anomiririrwa nemanhamba 1-12 mumagariro ezuva nezuva, sezvatinoita. semuenzaniso Sezvairi gumi kusvika kuchitanhatu o'clock - maawa matatu nehafu. Pamisangano yepamutemo uye mutsamba, nhamba dze12-24 dzinoshandiswa (somuenzaniso, mutungamiriri wehurumende achaita zvinyorwa pa 20.00 - THY ndege dzichabva pamakumi matatu nemakumi matatu emaawa, nezvimwewo).
Muchikamu chino, kutanga kwezvose, ngationgororei maawa chaiwo.
Pano nhovo dzinounzwa kunzvimbo iyo yakasara isina chinhu.
Kazhinji izwi rokuti Uhr haritauri. Pasinei nokuti izwi rokuti Uhr rinotsanangurwa haritauri zvarinoreva.
Musoro uri mumufananidzo uri pasi apa uye mifananidzo yakafanira inosanganiswa.
Gadzirai zvinyorwa nemifananidzo.
Kana iyo yeawa yakasara isina chinhu nematafura ari pamusoro apa, zvinonzi iyo satin iawa rinopfuura kana iri hafu yapfuura.
Dhigirii reGermany rakataridzika zvinotaurwa maererano nenzira inotevera.
Es is Viertel nach / vor .......
Muchirevo chepamusoro, shoko rokuti nach rinoshandiswa kureva "kupfuurira-uye" shoko rokuti vor rinoreva "kala-var".
Apo maawa akasara asina chinhu nematombo, nguva yei iyo yechina, kana kana nguva yapfuura nechechina, inounzwa.
ChiGerman Vocabulary uye Mashoko (Tsamba A ku 1)
Gehen Chaizvo uye Shot MuGerman
TAGS: 9. kirasi german kuona, German clock asking, chi German hauzauri clock, German watch, German clocks lecture, watches in German, watches german